The Ab Presents Nepal » से’क्स पावर बढाउने भि’याग्रा कस्तो औषधि ? यसको सेवनले हानी गर्छकी गर्दैन ?
काठमाडौं – भिया’ग्राले से’क्स पावर बढाउने दाबी गरिन्छ । यसको सेवनले यौ’न दूर्व’लताको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिन्छ । यौ’न दू’र्वलता भएकाहरुलाई यसको सेवन हीनताबोधको अन्त्य गराउँछ ।